ချစ်ချင်ပေမဲ့ အချစ်ကြောင့်ပဲနာကျင်ခံစားရမှာကြောက်လို့ ရှောင်ပြေးနေမိသူလေးတွေဖတ်ဖို့❤️ – Trend.com.mm
ချစ်ချင်ပေမဲ့ အချစ်ကြောင့်ပဲနာကျင်ခံစားရမှာကြောက်လို့ ရှောင်ပြေးနေမိသူလေးတွေဖတ်ဖို့❤️
Posted on June 21, 2018 June 21, 2018 by Noel
အချစ်ဆိုတာကို ကလေးကစားစရာတစ်ခုလိုထင်မှတ်ပြီးဆော့ကစားတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရ တဲ့သူတွေအဖို့ နောက်ထပ်အချစ်ကိုထပ်ပြီးရှာဖွေဖို့၊လက်ခံဖို့လည်းကြောက်ရွံ့နေ တယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်တာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အပေါ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့နားလည်မှုရှိရှိချစ်မယ့်သူကို လိုချင်တယ်။တွေ့လည်းတွေ့လာပေမဲ့ တကယ်တမ်းအဲ့ဒီလူကိုချစ်ပစ်လိုက်ဖို့၊ချစ်သူတွေဖြစ်လိုက်ဖို့ ကြောက်လန့်နေတတ်ပါတယ်။အရင်လိုထပ်ပြီးကစားခံရမှာ၊လှည့်စားခံရမှာ၊ထားခဲ့ခံရမှာ ကိုတွေးပြီးတော့ပေါ့။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တာဟာ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တော်တော်များများမှာ ဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အချစ်ကိုတွေ့နေပေမဲ့လည်း တွန်းထုတ်မိနေတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် စိတ်ပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသူတွေက ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေကိုအသုံးချကြည့်ဖို့ပြောထားပါတယ်။ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
“သူက င့ါကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။အရူးလုပ်မခံနဲ့။သူက င့ါကိုနာကျင်စေမှာပဲ။သူ့မှာ ငါ့အပြင် တစ်ခြားသူတွေလည်းရှိရင်ရှိနေမှာ”စသဖြင့် အရင်ကြိုတွေးပြီး စိတ်ပူပန်နေတာ မျိုးတွေကို မတွေးပါနဲ့တော့။တကယ်တော့ အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်က သင်ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို သက်သေမပြနိုင်တဲ့အထိတောင်စိတ်ကိုခြောက်လှန့်နေစေပါတယ်။ခဏလောက် အတွင်းစိတ်နဲ့အပြန်အလှန်စဉ်းစားတွေးတောနေတာကိုရပ်ပစ်လိုက်ပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာကို လွှတ်ချလိုက်ပါ။
အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုက ကိုယ့်ရဲ့ ကြောက်လန့်စိတ်ကိုအနိုင်ရလိုက်တာပါပဲ။ချစ်ရမှာ ကိုကြောက်နေရင် တကယ့်အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်သင်သိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ နာကျင်မှာကို မကြောက်ပါနဲ့။လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိလို့နာကျင်ရတာက ထပ်ပြီးမချစ်မိအောင် ကြိုးစားနေရတာထက်စာရင် ပိုပြီးလှပတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုပါပဲ။တစ်ချို့လူတွေ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လှပတဲ့အမှတ်တရတွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်မှာ ပြန်တွေးဖို့အမှတ်တရတွေ မရှိနေဘူးဆိုရင် မနာကျင်ဘူးဆိုရင်တောင် သင့်ကိုယ့်သင် မေးကြည့်သင့်တာက သင်တကယ်ရော ပျော်ရွှင်ရဲ့လား ဆိုတာပါပဲ။
ပထမဆုံး သင့်ကိုယ့်သင်သေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက် တွေ့လာပြီ။ကိုယ်ကရော ချစ်ရဲ့လား? ချစ်သူဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဘာညာတွေကြိုတွေးနေ တာထက် အဲ့ဒီသူကို သင်တကယ်ရောချစ်ရဲ့လားဆိုတာ အရင်သေချာအောင် လုပ်ပါ။သေချာမှ ကျန်တာတွေဆက်ပြီးတွေးပေါ့။
ခုခံကာကွယ်နေတာတွေရပ်လိုက်ပါဆိုတာကတော့ ချစ်မိရင်နာကျင်ရမယ်၊ ခံစားရမယ်ဆို တာကြီးတွေးပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်မိအောင်ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ပြီးComfort Zone ထဲ ထည့်နေတာကိုပြောတာပါ။အရင်ကနာကျင်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီအတွက် ဒီတစ်ခေါက်အချစ်ကလည်း သင့်ကိုနာကျင်စေဦးမယ်ထင်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သင့်ကိုယ်သင် comfort zone ထဲထည့်ထားတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီအချစ်ကသင့်ကိုတကယ်နာကျင်စေမှာလား။ပျော်ရွှင်စေမယ့် အချစ်လားဆိုတာကိုတောင်သင့်မှာသိခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။တကယ်တမ်း သင့်ရှေ့ကိုရောက် လာတဲ့အချစ်က နာကျင်စေသလား၊ပျော်ရွှင်စေသလားဆိုတာသိရဖို့ Comfort Zone ထဲက
ဒီလူကိုချစ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ နာကျင်မှာစိုးလို့ တွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ဒါဆို သင်ပျော်ရဲ့လား။ ဘ၀ဆိုတာ ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ရတာပါ။ ပျော်ရွှင်ရမယ်။၀မ်းနည်းရမယ်။နာကျင်ရမယ်။ ခံစားရမယ်။ဒီလိုခံစားချက်တွေကို မစီးမျောဘူးဆိုရင် ဘ၀မှာနေထိုင်ရတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲ မဟုတ်ဘူးလား။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်မညာတာအကောင်းဆုံးပါ။တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချစ်နေရဲ့သားနဲ့ နာကျင်ခံစားရမှာကိုကြောက်ပြီး အဝေးကိုတွန်းထုတ်လိုက်ရတာထက်ပိုပြီးနာကျင်တဲ့ အရာမရှိပါဘူး။
ဒီလိုပြောလို့ ကိုယ့်ကိုရည်းစားစကားလာပြောထားတဲ့သူကို ချစ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးခေါင်းမညိတ် လိုက်နဲ့နော်။တကယ်ရောချစ်ရဲ့ လားဆိုတာ စဉ်းစားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦး။အနာဂတ်ဆိုတာ မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုပါ။မမြင်ရတဲ့အရာအတွက်ကြိုပြီးမပူပန်ပါနဲ့။ပြီးသွားတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်း ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်မနေပါနဲ့တော့။လက်ရှိကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး ဘ၀ရဲ့အမှတ်တရ တွေကိုဖန်တီးလိုက်ပါ ❤️❤️❤️
အခဈြဆိုတာကို ကလေးကစားစရာတဈခုလိုထငျမှတျပွီးဆော့ကစားတဲ့သူတှေ နဲ့ကွုံတှလေ့ာရ တဲ့သူတှအေဖို့ နောကျထပျအခဈြကိုထပျပွီးရှာဖှဖေို့၊လကျခံဖို့လညျးကွောကျရှံ့နေ တယျဆိုတာ မဖွဈသငျ့တာတဈခုတော့မဟုတျပါဘူး။ကိုယျ့အပျေါမွတျမွတျနိုးနိုးနဲ့နားလညျမှုရှိရှိခဈြမယျ့သူကို လိုခငျြတယျ။တှလေ့ညျးတှလေ့ာပမေဲ့ တကယျတမျးအဲ့ဒီလူကိုခဈြပဈလိုကျဖို့၊ခဈြသူတှဖွေဈလိုကျဖို့ ကွောကျလနျ့နတေတျပါတယျ။အရငျလိုထပျပွီးကစားခံရမှာ၊လှညျ့စားခံရမှာ၊ထားခဲ့ခံရမှာ ကိုတှေးပွီးတော့ပေါ့။ဒီလိုမြိုးဖွဈနတေတျတာဟာ တဈယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး။ တျောတျောမြားမြားမှာ ဒီလိုမြိုးစိတျခံစားခကျြတှဖွေဈတတျပါတယျ။အခဈြကိုတှနေ့ပေမေဲ့လညျး တှနျးထုတျမိနတောမြိုးမဖွဈရအောငျ စိတျပညာရပျတှနေဲ့ပတျသကျပွီးလလေ့ာသူတှကေ ဒီလိုနညျးလမျးလေးတှကေိုအသုံးခကြွညျ့ဖို့ပွောထားပါတယျ။ဖတျကွညျ့လိုကျရအောငျ။
“သူက င့ါကိုတကယျခဈြတာမဟုတျဘူး။အရူးလုပျမခံနဲ့။သူက င့ါကိုနာကငျြစမှောပဲ။သူ့မှာ ငါ့အပွငျ တဈခွားသူတှလေညျးရှိရငျရှိနမှော”စသဖွငျ့ အရငျကွိုတှေးပွီး စိတျပူပနျနတော မြိုးတှကေို မတှေးပါနဲ့တော့။တကယျတော့ အဲ့ဒီအတှငျးစိတျက သငျဘာတှလေုပျနိုငျလဲဆိုတာကို သကျသမေပွနိုငျတဲ့အထိတောငျစိတျကိုခွောကျလှနျ့နစေပေါတယျ။ခဏလောကျ အတှငျးစိတျနဲ့အပွနျအလှနျစဉျးစားတှေးတောနတောကိုရပျပဈလိုကျပွီး စိတျရှုပျထှေးနတောကို လှတျခလြိုကျပါ။
အကွီးမားဆုံးအောငျမွငျမှုက ကိုယျ့ရဲ့ ကွောကျလနျ့စိတျကိုအနိုငျရလိုကျတာပါပဲ။ခဈြရမှာ ကိုကွောကျနရေငျ တကယျ့အခဈြဆိုတာ ဘာမှနျးတောငျသငျသိမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။ နာကငျြမှာကို မကွောကျပါနဲ့။လူတဈယောကျကိုခဈြမိလို့နာကငျြရတာက ထပျပွီးမခဈြမိအောငျ ကွိုးစားနရေတာထကျစာရငျ ပိုပွီးလှပတဲ့အမှတျတရတဈခုပါပဲ။တဈခြို့လူတှေ အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး လှပတဲ့အမှတျတရတှပွေောနတေဲ့အခြိနျမှာ သငျ့မှာ ပွနျတှေးဖို့အမှတျတရတှေ မရှိနဘေူးဆိုရငျ မနာကငျြဘူးဆိုရငျတောငျ သငျ့ကိုယျ့သငျ မေးကွညျ့သငျ့တာက သငျတကယျရော ပြျောရှငျရဲ့လား ဆိုတာပါပဲ။
ပထမဆုံး သငျ့ကိုယျ့သငျသခြောအောငျလုပျဖို့လိုပါတယျ။ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့သူတဈယောကျ တှလေ့ာပွီ။ကိုယျကရော ခဈြရဲ့လား? ခဈြသူဖွဈရငျ ဘယျလိုဘာညာတှကွေိုတှေးနေ တာထကျ အဲ့ဒီသူကို သငျတကယျရောခဈြရဲ့လားဆိုတာ အရငျသခြောအောငျ လုပျပါ။သခြောမှ ကနျြတာတှဆေကျပွီးတှေးပေါ့။
ခုခံကာကှယျနတောတှရေပျလိုကျပါဆိုတာကတော့ ခဈြမိရငျနာကငျြရမယျ၊ ခံစားရမယျဆို တာကွီးတှေးပွီး ဘယျသူ့ကိုမှမခဈြမိအောငျကိုယျ့စိတျကိုယျထိနျးခြုပျပွီးComfort Zone ထဲ ထညျ့နတောကိုပွောတာပါ။အရငျကနာကငျြဖူးတယျ။အဲ့ဒီအတှကျ ဒီတဈခေါကျအခဈြကလညျး သငျ့ကိုနာကငျြစဦေးမယျထငျနတေတျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သငျ့ကိုယျသငျ comfort zone ထဲထညျ့ထားတယျ ဆိုရငျတော့ ဒီအခဈြကသငျ့ကိုတကယျနာကငျြစမှောလား။ပြျောရှငျစမေယျ့ အခဈြလားဆိုတာကိုတောငျသငျ့မှာသိခှငျ့မရှိတော့ပါဘူး။တကယျတမျး သငျ့ရှကေို့ရောကျ လာတဲ့အခဈြက နာကငျြစသေလား၊ပြျောရှငျစသေလားဆိုတာသိရဖို့ Comfort Zone ထဲက
ဒီလူကိုခဈြခငျြတယျ။ဒါပမေဲ့ နာကငျြမှာစိုးလို့ တှနျးထုတျလိုကျတယျ။ဒါဆို သငျပြျောရဲ့လား။ ဘဝဆိုတာ ခံစားခကျြမြိုးစုံနဲ့ရှငျသနျနထေိုငျရတာပါ။ ပြျောရှငျရမယျ။ဝမျးနညျးရမယျ။နာကငျြရမယျ။ ခံစားရမယျ။ဒီလိုခံစားခကျြတှကေို မစီးမြောဘူးဆိုရငျ ဘဝမှာနထေိုငျရတာ ဘာအဓိပ်ပာယျရှိမှာလဲ မဟုတျဘူးလား။ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျမညာတာအကောငျးဆုံးပါ။တဈစုံတဈယောကျကိုခဈြနရေဲ့သားနဲ့ နာကငျြခံစားရမှာကိုကွောကျပွီး အဝေးကိုတှနျးထုတျလိုကျရတာထကျပိုပွီးနာကငျြတဲ့ အရာမရှိပါဘူး။
ဒီလိုပွောလို့ ကိုယျ့ကိုရညျးစားစကားလာပွောထားတဲ့သူကို ခဈြကွညျ့မယျဆိုပွီးခေါငျးမညိတျ လိုကျနဲ့နျော။တကယျရောခဈြရဲ့ လားဆိုတာ စဉျးစားဖို့မမပေ့ါနဲ့ဦး။အနာဂတျဆိုတာ မမွငျရတဲ့အရာတဈခုပါ။မမွငျရတဲ့အရာအတှကျကွိုပွီးမပူပနျပါနဲ့။ပွီးသှားတဲ့အရာတှကွေောငျ့လညျး ပူပနျစိတျတှဖွေဈမနပေါနဲ့တော့။လကျရှိကိုသာ အာရုံစိုကျပွီး ဘဝရဲ့အမှတျတရ တှကေိုဖနျတီးလိုကျပါ ❤️❤️❤️
အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကို ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေတဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲထုပ်တွေအကြောင်း
ကိုယ်တွေလုံးဝမထင်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးက Victoria Beckham အတွက်မရှိမဖြစ်ပါတဲ့